Inkqubo yokufudumeza ngemagneti yokubhrasha, ukuqinisa, ukunyibilika, ukubumba
Ikhaya / ukufudumala okunyuswa kwamaxesha amaninzi / Inkqubo yokufudumeza ngemagneti
iindidi: ukufudumala okunyuswa kwamaxesha amaninzi, umshini wokukrazula, Umshini okhuselekileyo wokukhupha, Ukunikezelwa kwamandla okuHlaba, Umshini wokuHlaba ngamaxesha aphakathi tags: ukukhutshwa kwexesha eliphezulu, I-IGBT yokutshisa i-heat system, i-heating brazing heater, Umshishini wokuBhaka, umatshini wokuqhelanisa, umenzi we heater, ukutyhulwa kwefowuni, Izixhobo zokutshisa i-Induction, Umshini wokufudumala, inkqubo yokufudumala, Umatshini wokunyibilikisa, umbane wokufakelwa kwamagnetic, Inkqubo yokufudumeza i-magnetic induction
Inkqubo yokufudumeza ngemagnethi ye-IGBT
imilo eyahlukeneyo kunye nobukhulu be i-coil coil unokutshintshwa ngokulula ukufudumeza iinxalenye ezahlukeneyo.
uthotho imodeli Amandla okufaka Amaninzi Umnje okhoyo wangoku I-Oscillate frequency igalelo Voltage Isekile yomsebenzi
I-DW-MF-15 Induction Generator 15KW 23A 1KHz-20KHz Ngokwe sicelo 3phases380V ± 10% 100%
I-DW-MF-35Iucuction Generator 35KW 51A
I-DW-MF-45 Induction Ukukhenkceza Ukutshiza Ukufakela Isithandathu 45KW 68A 1KHz-20KHz 3phases380V ± 10% 100%
I-DW-MF-70 Induction Ukukhenkceza Ukutshiza Ukufakela Isithandathu 70KW 105A
I-DW-MF-90 Induction Ukukhenkceza Ukutshiza Ukufakela Isithandathu 90KW 135A
I-DW-MF-110 Induction Ukukhenkceza Ukutshiza Ukufakela Isithandathu 110KW 170A
I-DW-MF-160 Ukutshisa ukuShushubeza iRod yokuQala iSithando somlilo 160KW 240A
I-DW-MF-15 i-Induction yokuNyibilikisa iZiko leMlilo 15KW 23A 1K-20KHz 3phases380V ± 10% 100%
I-DW-MF-25 Induction Isinyibilikisi somlilo 25KW 36A
I-DW-MF-35 i-Induction yokuNyibilikisa iZiko leMlilo 35KW 51A
I-DW-MF-45 i-Induction yokuNyibilikisa iZiko leMlilo 45KW 68A
I-DW-MF-70 i-Induction yokuNyibilikisa iZiko leMlilo 70KW 105A
I-DW-MF-90 i-Induction yokuNyibilikisa iZiko leMlilo 90KW 135A
I-DW-MF-110 Induction Flaming Furnace 110KW 170A
I-DW-MF-160 Induction Flaming Furnace 160KW 240A
I-DW-MF-110 Induction Equipment Extension 110KW 170A 1K-8KHz 3phases380V ± 10% 100%
I-DW-MF-160Iuction Equipment Equipment 160KW 240A
I-DW-HF-15 Series DW-HF-15KW 15KVA 32A 30-100KHz Isigaba esisodwa se220V 80%
I-DW-HF-25 Series I-DW-HF-25KW-A 25KVA 23A 20K-80KHz 3phases380V ± 10% 100%
I-DW-HF-35 Series DW-HF-35KW-B 35KVA 51A
I-DW-HF-45 Series DW-HF-45KW-B 45KVA 68A
I-DW-HF-60 Series DW-HF-60KW-B 60KVA 105A
I-DW-HF-80 Series DW-HF-80KW-B 80KVA 130A
I-DW-HF-90 Series DW-HF-90KW-B 90KVA 160A
I-DW-HF-120 Series DW-HF-120KW-B 120KVA 200A
I-DW-HF-160 Series DW-HF-160KW-B 160KVA 260A
DW-UHF-4.5KW 4.5KW 20A 1.1-2.0MHz Isigaba esisodwa220V ± 10% 100%
1.Ukufudumeza (ukutshisa okutshisayo, ukufudumala okutshisayo kunye nokunyibilikisa)
Ukukhutshwa kobushushu obushushu Iinjongo zokuqamba amaqhekeza omsebenzi wobushushu obuthile (izinto ezahlukeneyo zifuna amaqondo obushushu ahlukeneyo) kwezinye iimilo ngokucinezela i-punch ngoncedo lwe-punch press, umatshini wokubumba okanye ezinye izixhobo, ukulungiselela iimeko, ishushu eshushu semeko yewotshi, iwotshi yeflan, isiphatho, ukungunda isincedisi, ikhitshi kunye neetafile zentengiso, izinto zobugcisa, inqanaba eliqhelekileyo, isixhobo sokuvala, iinxalenye zomatshini ezenziweyo, isitshixo sebhedu, irivet, ipini yentsimbi kunye nepini.
Ukutshisa okushushu kubhekisa kunxibelelwano lwezinyithi ezahlukeneyo okanye isinyithi kunye ne-nonmetals ngokufudumeza ngokusekwe kumgaqo wokunweba okushushu okanye ukunyibilikisa okushushu, ukulungiselela iimeko, ukuwelda okungaphakathi kobhedu lwerediyetha yekhompyuter kunye nephepha lealuminium kunye nesithethi sewebhu, ikhompawundi yentsimbi kunye neplastiki. ityhubhu, ukutywina i-foil ye-aluminium (i-peel peel peel), i-motor rotor kunye nokutywinwa kwento yokufudumeza yombane.
Ukunyibilikisa ikakhulu ijolise ukunyibilikisa isinyithi kulwelo ngokusebenzisa iqondo lobushushu eliphezulu, elisebenza ikakhulu kunyibilikiswa isinyithi, isinyithi, ubhedu, ialuminiyam, zinc kunye nezinyithi ezahlukeneyo.
Unyango lwe-2 (ukucima umphezulu)
Cima izixhobo ezahlukeneyo zekhompyutha kunye nezixhobo, ezinje ngeplisi, utsalo, isando, izembe, izixhobo zokujija kunye nokucheba (ishear yegadi).
Cima izixhobo ezahlukeneyo zemoto kunye nezithuthuthu, ezinje nge crankshaft, intonga yokuqhagamshela, ipini ye piston, ivili letyathanga, ivili lealuminium, ivalve, ishaf shaft ingalo, ishafu shaft shaft, ishafti encinci kunye nefoloko.
Cima izixhobo zomatshini, ezinje ngomgangatho wendlela kunye nesikhokelo sikaloliwe.
Cima izixhobo zentsimbi ezahlukeneyo kunye neendawo ezenziwe ngomatshini, ezinje nge-shaft, izixhobo (ivili leetyathanga), i-cam, i-chuck kunye ne-clamp njl.
Ukucima izixhobo zokubumba zehardware, ezinje ngobumba obuncinci, isixhobo sokubumba kunye nomngxunya ongaphakathi wokubumba
3.I-welding (i-braze welding, i-soldering kunye ne-brazing)
Welding izixhobo ezahlukeneyo ukusika iintsimbi, ezifana isixhobo yedayimani, isixhobo esirhabaxa, isixhobo ukubhola, ingxubevange wabona blade, nzima ingxubevange mgawuli, umshini wokugaya, reamer, isixhobo ucwangciso kunye iziko olomeleleyo bit.
Ukuwelda izixhobo ezahlukeneyo zekhompyutha: I-soldering yesilivere kunye ukukhangela ibhondi zesinyithi zohlobo olufanayo okanye iintlobo ezahlukeneyo, ezinje ngehardware yangasese kunye neemveliso zasekhitshini, ifriji yokufakela ifanelekile, umhombiso wesibane, ulungelelwaniso oluchanekileyo lokulinganisa, isiphatho sehardware, i-eggbeater, intsimbi ye-alloy kunye nentsimbi, intsimbi kunye nobhedu kunye nobhedu nobhedu.
I-pot yentsimbi ye-pot welding isebenza ikakhulu kwi-braze welding yesetyhula, isikwere kunye nokunye okungekho mthethweni kwimbiza esezantsi. Kukwasebenza nakulo welding braze ocacileyo wezinye izinyithi.
Ukunyibilikisa i-disc yokufudumeza amanzi ngeketile yamanzi ashushu ikakhulu kubhekisa kwi-braze welding yesinyithi esisicaba, iphepha lealuminium kunye nezinto zokufudumeza zombane ngeendlela ezahlukeneyo.
3.Annealing (tempering kunye nokumodareyitha)
Ukudityaniswa kweemveliso ezahlukeneyo zentsimbi, ezinjenge-basin yentsimbi, itywinwe kunye ne-extruded can, i-annealed folded edge, isinki efakiweyo, ityhubhu yentsimbi engenasici, itafile kunye nendebe.
Ukudibanisa ezinye iziqwenga zomsebenzi wesinyithi, ezinje ngebhola yegolufa, umqondiso, itshi yobhedu, izixhobo zobhedu zekhitshi, isiphatho semela yasekhitshini, iblade, ipaneli yealuminium, ipeyinti yealuminium, iradiyetha yealuminiyam kunye neemveliso ezahlukeneyo zealuminiyam.
Ukuguqulwa rhoqo ukufudumala kwe-electromagnetic heat okanye ukufudumeza ubushushu ngokufutshane yindlela yokufudumeza izixhobo zentsimbi ngokuguqula amandla ombane abe kwoluhlu oluthile olusekwe kumgaqo wokungeniswa kombane. Isebenza ikakhulu kwisinyithi eshushu sisebenza, unyango lobushushu, ukuwelda kunye nokunyibilika. Olu hlobo lobuchwephesha bokufudumeza luyasebenza nakwimveliso yokupakisha (njengokutywinwa kwefoyile yealuminium esetyenziswa kwezamayeza nakwimveliso yokutya), izinto zeemiconductor (ezinje nge-silicon monocrystalline yesilicon kunye namalungu esinyithi afudumeleyo eglasi yeglasi).
Isiseko senkqubo yokufudumeza ngaphakathi zibandakanya i-coil induction, umthombo wamandla we-AC kunye neziqwenga zomsebenzi. I-coil ye-induction inokuveliswa ngeendlela ezahlukeneyo njengezinto ezahlukeneyo ezishushu. Ikhoyili iqhagamshelwe kunye nomthombo wamandla obonelela ngokutshintshana okwangoku kwikhoyili. Ukutshintshatshintsha okwangoku okukhoyo kule coil kunokwenza ukuba umazibuthe otshintshanayo udlule kumacandelo omsebenzi ukuvelisa ukuhamba kweeddy njengoko kufunwa ngokufudumeza.
Izibonelelo zenkqubo yokufudumeza yobume
Ukutshisa ngokukhawuleza: Ubuncinci benqanaba lokufudumeza lingaphantsi komzuzwana omnye (izinga lokufudumeza liyafumaneka kulungelelwaniso nolawulo).
Ukugubungela ubushushu ngokubanzi: Ingasetyenziselwa ukufudumeza iinxalenye zesinyithi ezahlukeneyo (buyisela ikhoyili yoqheliso olususekayo ngokokutshintsha okuthile kokusebenza).
ufakelo lula: inokusetyenziswa xa sele idityaniswe nomthombo wamandla, i-coil ye-induction kunye nombhobho wokuhambisa amanzi kunye nombhobho okhulayo; incinci ngobukhulu kunye nobunzima bokukhanya.
Ukusebenza lula: unokufunda ukuyisebenzisa ngaphakathi kwemizuzu eliqela.
Ukuqalisa ngokukhawuleza: ingaqalwa ukwenza umsebenzi wokufudumeza kwimeko yokuba amanzi kunye nokufumaneka kombane kuyafumaneka.
Ukusetyenziswa kwamandla aphantsi: Xa kuthelekiswa ne ityhubhu yokucoca eqhelekileyo izixhobo ezihamba rhoqo, inokugcina amandla malunga ne-70%. Ubuncinci ubungakanani beqhekeza lomsebenzi kukuba, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi kuya kuba njalo.
Ukusebenza okuphezulu:inezinto ezinje ngokufudumeza okufanayo (kuyasebenza ukulungelelanisa isithuba sekhoyili yoqheliso ukuqinisekisa ubushushu obufanelekileyo njengoko kufunwa yinxalenye nganye yomsebenzi), ukufudumala okukhawulezileyo kunye nokulinganiselwa kobungakanani be-oxic, kwaye inokukhusela nakuphi na ukungcola emva kokubanjwa.
Ukhuseleko olupheleleyo:inemisebenzi efana noxinzelelo olungaphezulu, ukubakho ngoku, ubushushu nobushushu bamanzi kunye nokulawula okuzenzekelayo kunye nokhuseleko.
Ubushushu obulawulekayo: kuyasebenza ukulawula ubushushu bokutshisa iziqwenga zomsebenzi ngokwexesha lokuseta elicwangcisiweyo, kwaye ngaloo ndlela ulawule ubushushu bokufudumeza kwindawo ethile yobugcisa.
Uyilo olupheleleyo lomthwalo: inokusebenza ngokuqhubekayo iiyure ezingama-24.
Ubungakanani obukhulu kunye nobunzima bokukhanya: inobunzima beshumi elininzi leekhilogram, apho, indawo encinci yomgangatho inokugcina ngokufanelekileyo indawo yokusebenzela.
Ukupheliswa kwamandla ombane aphezulu: ayifuni sinyathelo sinyukayo sombane esinokuvelisa malunga namawaka alishumi ombane, kwaye kungoko kuqinisekisa ukhuseleko oluphezulu.